मुख र आँखा सुख्खा हुने ‘जोग्रेन सिन्ड्रोम’: लक्षण र उपचार  OnlineKhabar
२०७४ असार २५ गते १०:५७ मा प्रकाशित
यस्तो लक्षण देखिए हुनसक्छ छालाको क्यान्सर
इरफान मात्र होइन, यी सेलिब्रेटीलाई पनि थियो गम्भीर रोग
कसरी तौल कम गर्छ यी प्रोटिनयुक्त खानेकुराले
पोखरा महानगरको नगरसभामा कांग्रेसको नाराबाजी
तीन वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर, ५ वर्षमा अर्गानिक उत्पादन निर्यातः मन्त्री खनाल
चर्को घामले हुनसक्छ छालाको क्यान्सर, कसरी जोगिने ?
बोत्तलबन्द पानीमा ‘मिनिरल’ हुन्छ ? के हो मिनिरल्स ?
प्रार्थना कसरी गरिन्छ ? मन्दिरमा प्रसादको भोग लगाएर प्रार्थना हुँदैन
नयाँ अध्ययनः ‘मिनिरल’ वाटर पिउँदा क्यान्सरको खतरा !
चेतन भगत भन्छन्: बुद्धिमान मानिस पनि प्रेममा मूर्ख हुनसक्छ !
श्रीमान अरुसँग सल्किने हुन् कि भन्ने शंका लाग्छ, म के गरुँ ?
के मधुमेह भएका पुरुषमा प्रजनन क्षमता हँदैन ?
गर्मीको खानपानमा यस्तो गल्ती त भइरहेको छैन ?
मधुमेह, उच्च रक्तचापको रोगीलाई गुनिलो करेला
दाँत स्वास्थ्य मात्र होइन, सुन्दर पनि हुनुपर्छ